Okpomoku nke uwa na emetuta ahihia ahihia | Network Meteorology
Okpomoku di n’uwa n’etu ya na ahihia
Enweghị nje na nje virus, ọ nweghị anụmanụ ga-adị ndụ. Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ndị nwere ike ibute ọrịa, ọtụtụ n’ime ha nwere ike ịnwụ, nke bụ eziokwu bụ na e nwere ọtụtụ ndị ọzọ na-enyere onye ọbịa ahụ aka ka ọ nwee ezigbo ahụike. N'ezie, ọbụnadị mmadụ enweghị ike ịdị ndụ naenweghị ụdị nje bacteria 2000 na-ebi n’ime ya.
Ma okpomoku zuru uwa na-emetuta mmadu nile, tinyere ahihia ahihia, dị ka otu nnyocha e bipụtara na 'Nature Ecology and Evolution' si dị.
Mkpụrụ osisi ma ọ bụ eriri afọ nke microbiota bụ nke nwere nje bacteria na-ebi n'ime eriri afọ nke na-enwe mmekọrịta mmekọrịta, ma na onye nwe ụlọ ma ndị ọzọ. N'ime ya, nwere ike ịzụlite ma mụbaa na gburugburu ihe dịka 2 Celsius dị ọkụ karịa n'èzí.
Otú ọ dị, amara na enwere ike igbanwe ya site na usoro ihe di iche (nsia secretions) na mbibi (dị ka ịka nká, nrụgide, ọgwụ ndị nnabata ahụ na-eri, na ụdị nri a na-eso). Ma ugbu a, e nwekwara ihe ọhụrụ: okpomọkụ gburugburu ụwa, nke dị ka ọmụmụ ahụ nwere ike ibibi ya.
Iji ruo nkwubi okwu a, ndị nyocha ahụ ejirila ngwere mee ọmụmụ ihe na ebe a na-akpọ Metatron, ebe ha nwere ike ijikwa okpomọkụ ma hụ etu ụmụ anụmanụ si meghachi omume, yana osisi afọ ha. N'ụzọ nke a, nwere ike ịchọpụta na gburugburu ebe obibi nwere okpomọkụ 2 ruo 3ºC dị elu karịa nke ugbu a, nke bụ ihe a na-atụ anya ka ọ bụrụ na njedebe nke narị afọ, ihe dị iche iche nke ndụ microbial ndụ ejirila 34% belata n'ime naanị otu afọ.
N'ihi ya, Ngwere nwere mkpụmkpụ ndụ dị mkpụmkpụ karịa nke ndị ọzọ nke a na-etinyeghị na nrụgide ihu igwe, nke na-enye ọtụtụ ihe ị ga-echebara echiche, dịka ndị ọkachamara na-ekwu na enwere ike ịchọta nsogbu ndị a n'ọtụtụ ụdị ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Okpomoku di n’uwa n’etu ya na ahihia
Tundras na-arụ ọrụ dị ka amplifiers nke mgbanwe ihu igwe
Couldwa nwere ike ịgafe ogo 1,5 na ọnọdụ okpomọkụ na 2026